पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई जापानवाट यस्तो सुझाव | Matrisandesh
पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई जापानवाट यस्तो सुझाव
हवलचन्द्र लामा,जापान ।
हामीले मुखले ’भिजिट नेपाल’ मात्र भनेर भ्रमण बर्ष सफल हुँदैन भन्ने यहाँहरु सबैमा जानकारी भएकै कुरो हो । धेरै लामो समयको अध्ययन र भिजिट नेपाल १९९८ को आशालाग्दो परिणाम एवं अनुभवबाट पनि यहाँहरुले नयाँ नयाँ प्रक्रिया अपनाई पर्यटक भित्र्याउन धेरै मिहेनत गरी राख्नुभएको कुरा हामी जनताले अनुभूत गरिराखैकै छौं ।
बिशेषतः मन्त्रीज्यू व्यस्त कार्यतालिकाका बाबजुद पनि बिदेश पुगेर नेपाली दूताबाससंग सहकार्य गर्दै प्रचार गरिरहनु भएको हामीले सञ्चार माघ्यमबाट पढिरहेका छौं ।
मन्त्रीज्यू, तपाई युवा मात्र हैन जुझारु र हरेक क्षेत्रमा अनुभवी हुनुभएकोले तपाईबाट पर्यटन व्यवसायी मात्र हैन समग्र नेपालीको ठूलै अपेक्षा हुनु स्वभाविक हो ।
चिनियाँ प्रख्यात कलाकारदेखि बेलायतको पर्वतारोही लगायतलाई पर्यटन दूत नियुक्त गरी अघि बढिरहनु कार्य ज्यादै नै सह्रानीय छ ।
यद्यपी करीव २०-२५ देशको भ्रमण अनुभव र नेपालमा अझै सुरु हुन नसकेको एउटा कुरा आज खुला रुपमा यहाँ सामु राख्न चाहान्छु । बिषय र सन्दर्भ सामान्य भए पनि दीर्घकालिन महत्व र प्रभाव पार्न सक्ने लागेकोले आफुलाई लागेका केही भनाई राख्ने जमर्को गरेको छु । नितान्त ब्यक्तिगत बिचार भएकोले कुनै हालतमा लागू हुनैपर्छ भन्दा पनि सोचनीय बिषय बनोस् भन्ने आशामा छु ।
१. काठमाडौं एअरपोर्ट बाट ३ वटा जति नगर बसको व्यवस्था गर्ने
उदाहरणका लागि :
क. रुट (१) विमानस्थलबाट कोटेश्वर, सातदोबाटो, जावलाखेल, एकान्तकुना, कालीमाटी, थापाथली, पाटन, पुल्चोक, मंगलबजार, ग्वार्को हुँदै फर्कने
ख. रुट (२) बिमास्थलबाट बानेश्बर, माइतीघर, कमलपोखरी, दरबारमार्ग, सुन्धारा, दरबार स्क्वायर, कान्तिपथ, ठमेल, लाजिम्पाट, ज्ञानेश्वर, भिमसेन गोला, सिनामंगल हुँदै फर्कने
ग. रुट (३) विमानस्थलबाट चाबहिल, बौद्ध, महाराजगञ्ज, गोंगबु, स्वयम्भू, क्षेत्रपाटी, सोह्रखुट्टे, लैनचौर, महाराजगञ्ज, चाबहिल हुँदै फर्कने
व्यवस्थापन पक्ष :-
क. व्यस्त समयमा (बिजी आवर) मा धेरै र बिहान बेलुका कम बस गुडाउने ता कि अनावश्यक खर्च नहोस्
ख. बस हरेक ३० मिनेट देखि ६० मिनेट र यात्रुको चाप हेरेर समय फिक्स गर्ने
ग. विशेष परिस्थिति बाहेक बस तोकिएको समय
(नो नेपाली टाइम) मै गन्तब्यमा पुग्ने र प्रस्थान गर्ने
घ. चालक र सहचालक अनिवार्य अंग्रेजी भाषा बोल्न जानेको हुनुपर्ने
ङ. बसका कर्मचारीहरुले सेवाग्राहीसंग कसरी नम्र, विनयशीलता र यात्रुमैत्री संवाद एवं व्यवहार गर्ने भन्ने बारे तालीम लिएको हुनुपर्ने
च. बसमा लगेज राख्ने पर्याप्त स्पेस (डिकी) भएको हुनुपर्ने
छ. बसमा अनिवार्य सीसी क्यामेरा जडान गरिएको हुनुपर्ने ता कि कर्मचारीले कुनै बदमाशी गर्न नपाओस्
ज. बसमा पूर्णतया वातानुकुलित (एसी जडानयुक्त) हुनुपर्ने
झ. बसभित्र कुन ठाउँमा पुग्न कति समय लाग्छ, अहिले कुन ठाउँ पुगेको हो भन्ने बारे नियमित अंग्रेजी भाषामा उदघोषण सेवा हुनुपर्ने
ञ. बसभित्र नेपालका पर्यटकीय गन्तब्य स्थलहरुको बारेमा भिडियो डिस्प्ले गरिरहने
ट. असहाय, अशक्त, अपाङ्ग, बृद्ध, बालकहरुका लागि बस चढ्न सजिलो हुने गरी भर्‍याङको व्यवस्था गर्ने
ठ. सामान (लगेज) को लोड, अनलोडको व्यवस्था सहचालकले गर्ने व्यवस्था गर्ने
ड. बसको भाडा दर र समय तालिका उडानको चाप र बाटोको दूरी हेरी तय गर्ने
ढ. संभव भएसम्म बस रोकिने र यात्रु पर्खने ठाउँमा सुविधाजनक प्रतिक्षालयको व्यवस्था गर्ने, बसस्टपमा सार्बजनिक शौचालय र ध्रुमपान गर्ने ठाउँको ब्यवस्था गर्ने
(लेखक लामा नेपाल र जापानमा समेत पर्यटन व्यवसायमा आबद्ध छन्)